Xildhibaankii u horeeyay ee Beelaha Banaadiriga oo Maanta lagu doortay Magaalda Muqdisho!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Xildhibaankii u horeeyay ee Beelaha Banaadiriga oo Maanta lagu doortay Magaalda Muqdisho!!
Xildhibaankii u horeeyay ee Beelaha Banaadiriga oo Maanta lagu doortay Magaalda Muqdisho!!
Xarunta Gaadiidka Booliska oo ay ka dhaceysay doorashadan ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyay, iyadoo dowladda ay xeratay waddooyin badan, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda lasii guda galo doorashada Dadban ee xubnaha Labada aqal ee beelaha Dirta Waqooyi Soomaliland.
Previous PostDab qabsaday iskuul ku yaalla Koonfurta dalka Turkigan & gabdho badan oo ku naf waayey Dabkaas Daawo Sawirro!! Next PostDaawo MUUQAAL: Maamulka KHAATUMO oo lacag 40-Kun oo Dollar ku Wareejiyey Gudiga Abaaraha ee Gobolada S.S.C iyo baaq uu soo jeediyay!!